Virtual workspace and cloud communication
Wolves provides unified communications solutions for business. Our cloud-based solutions help business optimize their customer support and improve their productivity throughaunified workspace
Powered by Antbuddy
တစ်ဦးနိုင်စွမ်းနှင့်အရွယ်မှာပလက်ဖောင်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးရန်။ ဟာ့ဒ်ဝဲ, installation နဲ့အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးက enterprise level ခေါ်ဆိုခအလယ်ဗဟိုတက်သတ်မှတ်မည်။
Wolves Chat ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးကို virtual Workspace ၏ထိပ်ပေါ်မှာလည်ပတ်။ ဒါဟာချောမွေ့စွာသင့်ရဲ့အဖွဲ့နှင့်အတူ ချိတ်ဆက်. နှင့်သင့်ဖောက်သည်ကိုထောကျပံ့ဖို့စုစည်း Workspace ဖြစ်ပါတယ်။
Wolves CRM န်ဆောင်မှုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ရောင်းအားအင်အားသုံးဖောက်သည်အဆက်အသွယ်များ, အပေးအယူ, မှတ်စု, မှတ်ချက်များနှင့်အခြားစာရွက်စာတမ်းများစီမံခန့်ခွဲကူညီဖို့ရန် CRM module ကိုတပ်ဆင်ထားကြသည်။
Wolves Service Dashboard
ဝံပုလွေဝန်ဆောင်မှု Dashboard ကိုကလေယာဉ်ခရီးစဉ်, ခရီးသွားလမ်းညွှန်သို့မဟုတ်ကားများဖြစ်သည်န်ဆောင်မှုများအတွက်ဘွတ်ကင်ဆိုက်နှင့်ဖုံးလွှမ်းအေဂျင်စီများ booking သိရသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွားနှင့်အချိန်ဇယားဆွဲဆော့ဗ်ဝဲနဲ့, အေးဂျင့်များကအမြဲနိုင် ...
Clients တွေအနေနဲ့ဘို့ customization
Ready Integration with ERP/App
ဒါဟာအထူးသဖြင့်မည်သည့်အဖှဲ့အစညျး၏ထိရောက်မှုကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသင့် developer များအတွက်သင့်လျော်သောပြုပြင်မွမ်းမံထုတ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုပါရန်ပွင့်လင်းအရင်းအမြစ် ERP / applications များဆက်ကပ် ...
ဝံပုလွေဘက်ပေါင်းစုံငွေပေးချေဖြေရှင်းချက်သင့်လုပ်ငန်းမျိုးစုံကို gateway များသည်မှတဆင့်ငွေကြေးတန်ဖိုးလွှဲပြောင်းမှတဆင့်ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စများကိုအခြေချရန်ကိုသုံးနိုငျသော tools တွေကိုဖြစ်ကြသည် ...
Wolves.cloud နှင့်အတူစတင်လွယ်ကူသည်, ဆိုင်းအပ်ထက်နည်း 60 စက္ကန့်ကြာနှင့်သင့်အကောင့်ထို့နောက်ပြင်ဆင်ပြီးနှင့်သစ်လုံးများအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အပြည့်အဝ-အထူးပြုလုပ်ထားသောရုံးတင်စစ်ဆေးန့်အသတ်ဒေတာပမာဏ၏ 15 ရက်ပေးပါသည်, ဤအချိန်ကာလအတွင်းသင်သည်သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အစီအစဉ်ကိုရွေးနိုင်သည်။ Wolves.cloud နှင့်အတူစမတ်အလုပ်လုပ် - ပိုဖောက်သည်ရှာတွေ့လက်ရှိအကောင့်ကြီးထွားနှင့်နီးစပ်အပေးအယူပိုမိုမြန်ဆန်။
POWERED BY BOD TECH CO., LTD.